Filtrer les éléments par date : mardi, 12 octobre 2021
mardi, 12 octobre 2021 20:39
Tsodrano nomen'i Mpanjaka Ndrenogny Ivato Vohipeno
Maro hoy izy, ireo tonga mangataka Tsodrano eto, ary omeko daholo hoy izy, fa ny ao amponao tsy miova hoy izy no ahatanteraka izay irianao.
Tsy adinoko hanatranao Dadilahy na efa tsy eto intsony aza ianao.
mardi, 12 octobre 2021 16:46
Fitsarana : Afaka i Pr Auberlin sy dokotera Jean Marie
Taorian'ny fitsarana androany talata 12 oktobra 2021 an'i Profesora Auberlin Rakototiana sy Dokotera Rakotosamimanana Jean Marie, Directeur Adjoint Technique na DAT, izay ampangaina ho niray tsikombakomba tamin'ny fampandosirana ny gadra marary Eddy Maminirina, dia nivoaka ny didy :
- Profesora Auberlin Rakototiana sy Dokotera Rakotosamimanana Jean Marie, afaka madiodio.
- Eddy Maminirina migadra 2 taona an-tranomaizina, sazy mihatra noho ny fikasana andositra
- Mpiandry fonja 3 migadra 1 taona an-tranomaizina sazy mihatra, ireo nitondra azy nivoaka ny efitra fitsaboana
- Mpiandry fonja 1, afaka noho ny fisalasalana
- Vehivavy 1 nitsikombakomba tamin'i Eddy, migadra 1 taona an-tranomaizaina sazy mihatra.
Rakotomalala Lucien : Hofongarina hoentina any Befandriana Sud ny taolambalon’ity depiote IRD ity
Voalaza fa nanana areti-mitaiza sohika ity parlemantera ity. Talohan’ny nifaran’ny fotoam-pivoriana ara-potoana ny Antenimieram-pirenena izy no efa tsy salama, ary tsy tonga niatrika fivoriana intsony. Tao amin’ny Hopitaly Miaramila Soavinandriana no nitsaboana azy, saingy tsy tana ny ainy.
mardi, 12 octobre 2021 16:17
Trangam-piarahamonina : Zazavavy tsy ampy taona maty nisy nanolana
Zazavavy kely vao 08 taona monja no maty nisy nanolana tao Ambatoboeny, omaly.
Efa eo anivon’ny fianakaviana ny vatana mangatsiakan’ilay zaza. Karohina ny nahavanon-doza.
mardi, 12 octobre 2021 12:49
ENS Ampefiloha : Nidina an-dalambe migrevy ny mpianatra
Nilanja sorabaventy nivoaka ny faritry ny sekoly, tonga teny amin’ny arabe ny andiana mpianatra avy ao amin’ny Ecole Normale Supérieure Ampefiloha-Antananarivo.
"Te hianatra izahay fa vahao ny olan'ny PAT, na ireo mpiasa sy mpandraharaha eny anivon’ny oniversite", hoy izy ireo.
Niditra an-tsehatra ny mpitandro ny filaminana, nanao izay hialan'ireo mpanao fihetsiketsehana teny amin'ny arabe tsy hanelingelina ny fifamoivoizana.
mardi, 12 octobre 2021 09:34
Ministeran’ny Fitsarana : Notolorana mari-pankasitranana ireo Minisitra teo aloha
Voalohany teo amin’ny tantaran’ny Ministeran’ny Fitsarana, no misy fanehoana ny fankasitrahana ireo zoky ray aman-dreny teo aloha. Taorian’ny fananganan-tsaina ny Alatsinainy 11 Oktobra 2021 teto Faravohitra, dia nisy ny lanonana fanolorana mari-pankasitrahana ho azy ireo, na ireo izay nisolo tena azy ireo toy ny zanany, avy amin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, IMBIKI Herilaza.
Mitontaly 26 mianadahy ireo Minisitry ny Fitsarana na Sekreteram-panjakana miadidy ny Fitsarana teo aloha, hatramin’ny nahazoana ny fahaleovantenan’i Madagasikara.
Tamin’ny fandraisam-pitenenana nataon’ny solontenan’ireto Minisitry ny Fitsarana teo aloha ireto, ny Filohan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana (HCC) Rakotoarisoa Florent, dia nohamafisiny ny fahavononan’izy ireo hifanome tanana amin’ny fampandrosoana ny asam-pitsarana, hanolo-kevitra sy hanampy amin’ny ankapobeny.
mardi, 12 octobre 2021 09:33
12 octobre : Journée mondiale de l'arthrite.